Isbarbar dhigga awoodda Hindiya iyo Pakistan - BBC News Somali
Image caption Hindiya iyo Pakistan ayaa horay u dagaallamay 2 jeer
Waxaa heer aad u xun mareysa xiisad colaadeed oo u dhaxeysa dalalka dariska ah ee Hindiya iyo Pakistan, kuwaasoo labadooduba heystaan hubka sida ba'an wax u gumaada ee nuclear-ka.
Ugu yaraan 42 askari oo ka tirsan booliska sida milatariga u tababaran ee dalka Hindiya ayaa lagu dilay qaraxa ismiidaaminta ahaa oo ay mas'uuliyaddiisa sheegteen kooxda fariisinka ku leh gudaha Pakistan ee lagu magacaabo Jayshu Muxammad.
Pakistan oo hay'ado caalami ah ku amartay in ay dalka ka baxaan.
Ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa xilligaas wacad ku maray in waddankiisu uu jawaab kulul ka bixin doono weerarka loo geystay ciidankooda oo ahaa kii ugu khasaaraha badnaa ee dhaca muddo tobannaan sano ah.
Dhaqaalahaas ayaa ah boqolkiiba 2.1 ka mid ah dakhliga guud ee soo gala dowladda, sida laga soo xigtay hay'adda caalamiga ah ee Istiraatiijiyadda oo magaceeda loo soo gaabiyo (IISS).
Intii u dhaxeysay sannadihii 1993-kii iyo 2006-dii, in ka badan boqolkiiba 20 ka mid ah dhaqaalaha sannadlaha ah ee ku baxa dowladda Pakistan waxaa lagu kharash gareeyay howlaha la xiriira milatariga, sida lagu sheegay qiyaas ay sameysay hay'adda caalamiga ah ee cilmi barista nabadda, ee uu fadhigeedu yahay magaalada Stockholm.
Waxay sidoo kale hay'addan sheegtay in sannadkii 2017-kii milatariga Pakistan ay ku baxday boqolkiiba 16.7 ka mid ah dhaqaalaha ay sannadkiiba kharash gareyso dowladda.
Image caption Labada waddan ayaa heysta hubka nuclear-ka
Pakistan ayaa heysata 140 ilaa 150 madax oo hubka nuclear-ka ah halka Hindiyana ay heysato 130-140 madax oo nuclear ah, sida laga soo xigtay hay'adda SIPRI.